Wasiir Bayle:41 Milyan oo Dollar Oo lagu Daabaco Lacag Cusub Ayan Ka Suganynaa IMF | SAHAN ONLINE
Wasiir Bayle:41 Milyan oo Dollar Oo lagu Daabaco Lacag Cusub Ayan Ka Suganynaa IMF
MUQDISHO- Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka C/raxmaan Ducaale Bayle oo shir Jaraa’id ku qabtay Muqdisho wuxuu sheegay in dakhliga soo galo dowladda uu kordhay 58% marka la barbardhigo sanadkii hore, waxaana uu sheegay in dowladu ay haatan awoodi inay bixiso dhammaan kharashaadka iyo musharaadka shaqaalaha dowladda.
Wuxuu sheegay in gabagabo ay marayso qorshaha lagu soo daabacayo lacagta cusub ee shilin Somaliya. Sidoo kalena ay filayaan in dowladu hesho 41 milyan oo dollar oo ka sugayaan Hay’adda lacagta aduunka IMF oo lagu fuliyo soo daabicida lacagta, madaama ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa ee soo xaraynta dakhliga dowladda.
“Dakhliga ina soo galay ilaa iyo boqolkiia 58 ayaan daboolnay meel hoosa ayaan kasoo bilownay dhawaan waxaan ilaah ka rajeyneynaa wax kasta oo dowlada ay ku socotaba inaan anagu dabooli karno Waxaa noo suurta gashay inaan soo wareejino dakhliga ay qaadi jireen Wasaaraddaha Xukuumadda Soomaaliya iyo Maxkamadaha taas waxay noo fududeysay inaan gaarno heerkii loo baahnaa”. ayuu yiri, wuxuuna sii raaciyay.
Wasiirka wuxuu ugu dambeyn u Mahad celiyay Wasiiradda Maaliyadda Dowlad Gobaleedyada dalka uu sheegay inay wada shaqeyn wanaagsan la leeyihiin isagoo sheegay in la mideynayo Canshuuraha guud ahaan dalka laga qaado.